Ngikhokhelwe intela. Ungayivimba kanjani intela yokuthengisa ku-oda lami? - DataNumen
Sisebenzisa MyCommerce.com futhi SengiSondele.com ukuphatha ukuthengiselana kwethu okuku-inthanethi.
Uma u-oda nge-MyCommerce.com, kuzodingeka ukuthi ukhokhele intela yokuthengisa ku-oda lakho kuqala. Ngemuva kokuthi umyalo uvunyelwe, thumela idokhumende lakho lesitifiketi sokungakhokhiswa intela noma i-VAT evumelekile noma i-GST ID kithi, lapho-ke sizokubuyisela intela yakho.
Uma u-oda nge-FastSpring.com, lapho-ke unga vimbela intela ekuqoqweni ku-oda lakho ngokunikezela nge-VAT yakho evumelekile noma i-GST ID ngesikhathi sokuthenga. Inkambu ye-VAT noma ye-GST ID kungenzeka noma ingatholakali ngokususelwa ezweni lakho. Amazwe avela eMelika awanayo inkambu ye-VAT / GST ID ngoba ayisebenzi:
Ngemuva kwalokho amazwe avela eYurophu noma e-Asia azoba nenkambu ye-VAT / GST ID, njengoba ingezansi:
Ungachofoza ku- "Enter VAD ID" noma Faka i-GST ID "ukufaka i-VAT / GST ID yakho ngokufanele.Uma ukhohlwa ukufaka i-VAT / GST ID yakho ku-oda lakho, noma unesitifiketi esikhishwe enteleni kuphela, lapho-ke unga-oda ngentela yokuthengisa. Futhi ngemuva kokuvunywa kwe-oda, Xhumana nathi ukubuyisa imali yentela.
buy, I-GST, Oda, ukuthenga, intela yokuthengisa, intela ayikhokhiswa, VAT
Kubuyekezwe ngoMeyi 14, 2021
Kwenzekani ngemuva kokuthumela i-oda?Ngabe unikeza isaphulelo semfundo?